वृद्धि होंठ: सुधार को आधुनिक तरिका बारे विरामीहरु को प्रतिक्रियाहरू
आज प्लास्टिक सर्जरी भनेर व्यायाम र ओठ वृद्धि सहित कुनै पनि नकारात्मक उपस्थिति, ठीक गर्न अनुमति दिन्छ, धेरै राम्रो विकास भएको छ। विरामीहरु को समीक्षा यस्तो अपरेसन पछि ओठ पूर्ण, प्राकृतिक मात्र थप आकर्षक र सेक्सी नजर हो भनेर हामीलाई आश्वस्त। एक महिला हेर्दा, तपाईं निश्चय साथ भन्न सक्छौं उनको ओठ "मूल" र कृत्रिम छैनन् भनेर, त्यसैले सञ्चालन घटिया थियो।
म ओठ कसरी विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ
केही महिला तथापि, यो अप्रभावी छ, घर मा ओठ वृद्धि पकड गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ कि कार्यहरू गर्न Resort। परंपरागत लागि ओठ वृद्धि प्लास्टिक सर्जरी वा वृद्धि गर्छन्। पछि प्लास्टिक सर्जरी reductive उपचार र अवलोकन आवश्यक तर, प्रक्रिया contouring सामान्यतया एक outpatient सेटिङ मा प्रदर्शन गरिएको छ भने सूचना। अब यो लगभग सिलिकन ओठको परिचय प्रयोग गरिन्छ कहिल्यै, र रोगी आकार, मात्रा, को ओठको विषमता, वा उमेर-सम्बन्धित झुर्रियाँ उपस्थिति संग असन्तुष्ट छ भने, आकृति सुधार गरिन्छ।
आकृति biogel प्रयोग
नियम, वृद्धि लगे ओठ बोटक्स वा Biogel :. "Perlayn" "Agarose" "Yuviderm" "Restylane" "Teosial", आदि यी तयारी जाँच गरिन्छ र पूर्ण मानव Tissues उपयुक्त। उनको गुण र विशेषताहरु अरु देखि अलग, तिनीहरूलाई प्रत्येक त्यसैले biogel चयन गर्न एक डाक्टर हेर्नुपर्छ।
आफ्नो तरिका को पहिलो दबाइ जसको कार्य अध्ययन छ "Restylane", थियो। उहाँले जटिलताहरू दिन छैन, तर यो एक drawback छ - यसको परिचय आकृति कुनै थप दुई महिना भन्दा पकड पछि, त्यसैले बस एक ओठ वृद्धि फिट। जेल "Teosial" को प्रयोगमा समीक्षा प्रभाव बारे एक र आधा वर्ष रहन्छ, तर यसको कार्य कम inspected छ भन्छन्।
सञ्चालन contouring स्थानीय एनेस्थेसिया अन्तर्गत गरिन्छ। Biogel ठीक सुई छाला अन्तर्गत सम्मिलित छ र मालिश मार्फत वितरण गरिएको छ। सबै भन्दा राम्रो परिणाम लागि, ओठको अत्यधिक सुनिंनु जोगिन गर्न, केही समय गरिरहेको को प्रक्रिया।
को ओठ मा प्रक्रियाहरु पछि bruising र सुनिंनु, यस क्षेत्रमा धेरै रक्त नली कारण हुन सक्छ। त्यसैले, यो सूर्य सर्जरी जोखिम, साथै शारीरिक गतिविधि र कुनै पनि गर्मी उपचार पछि सिफारिस गरिएको छैन।
दबाइ को विकल्प मा निर्भर गर्दछ, प्रभाव फरक हुनेछ। र आकृति प्लास्टिक बारम्बार क्रममा, जैव-जेल पहिले प्रयोग गर्न, पछिल्लो प्रक्रिया समयमा प्रबन्ध दबाइ पूरा resorption लागि प्रतीक्षा बिना प्रबन्ध गर्न सकिन्छ।
आफ्नै बोसो प्रयोग आकृति प्लास्टिक
यस्तो प्लास्टिक को प्रकारको बोसो इंजेक्शन, lipofilling भनिन्छ। यो प्रक्रिया पनि अन्तर्गत गरेको सकिँदैन स्थानीय एनेस्थेसिया, तर यो गर्न सकिन्छ, र सामान्य अन्तर्गत। अर्डर को भुँडी वा नितम्ब देखि adipose ऊतक लिन, साना incisions छाला मा छन्। त्यसपछि यो बोसो ऊतक एक सिरिंज प्रयोग गरेर मुख मा शुरू गरिएको छ।
थप आज आधुनिक विधि mikrofetgrafting छ - एक laborious र समय-खपत प्रक्रिया हो, तर यसको दक्षता धेरै उच्च बोसो इंजेक्शन, lipofilling छ। तर, सबै क्लिनिक यस कार्यका प्रदर्शन गर्दा आवश्यक विशेष cannulas छ।
होंठ वृद्धि को एक तरिका रूपमा प्लास्टिक सर्जरी
धेरै महिलाहरु गोप्य ओठ वृद्धि बारेमा सपना - समीक्षा पुष्टि। तिनीहरूले मात्र होइन मात्रा, तर पनि फारम सन्तुष्ट छैनन्। यो ओठ शीर्ष भन्दा गर्दा Plumper तल आदर्श हो कि विश्वास छ। प्लास्टिक सर्जरी यो फारम प्राप्त गर्न आवश्यक हुनेछ।
उमेर मा महिला ओठ मा छाला फैलएको छ, यो परिवर्तन हुन सक्छ ओठको फारम र झुर्रियाँ। कुल facelift संग ओठ वृद्धि गर्न डिजाइन प्लास्टिक, पूरा गर्न निश्चित हुन। यस प्रक्रिया गर्दैन जो महिला, समीक्षा, अब तिनीहरूले कम मधुर स्वर सामना भन्छन्।
माथिल्लो ओठ छाला को पट्टी कटौती गरिएको छ किनभने यो प्रक्रिया हो, सामान्य एनेस्थेसिया अन्तर्गत गरिन्छ, त्यसपछि ओठको आकृति गठन, र केवल त्यसपछि sutured र शीर्ष लाउने। तपाईं सूर्य रहन भने र फाटो छैन को postoperative अवधि, सामान्यतया पीडारहित छ।
प्लास्टिक चाक: सङ्केत गर्छ, contraindications, जटिलताहरू
दर्जा प्लास्टिक सर्जरी
प्लास्टिक सर्जन Gogiberidze Otari Teimurazovich: जीवनी
Fraxel - यो के हो? Fraxel: समीक्षा र प्रक्रिया बारे विरामीहरु को राय
स्तन वृद्धि। समीक्षा र सिफारिसहरू
मास्को मा SPIC सौन्दर्य संस्थान। संस्थान बारेमा समीक्षा
को हिउँदमा सुन्दर र स्वादिष्ट फल पेय
होटल Le Royale शाही छुट्टी Resort5* (मिश्र, Sharm el-शेख): समीक्षा, वर्णन, पर्यटकहरु को समीक्षा
प्ले मार्केट: कुनै जडान छैन - सम्भावित कारणहरू
डा Kovalkov - आहार। समीक्षा र सिफारिसहरू
Aquafiltering संग Vacuums: ग्राहक समीक्षा
तपाईं के जनावर आफ्नो आँखा खुला संग सुतिरहेको छन् थाहा छ?
कहिले र सेन्ट Tryphon को प्रार्थना के मद्दत गर्छ मा?
थाइरोइड उपचार लोक उपचार: लागूपदार्थ वैकल्पिक छ!
Dolin Anton: जीवनी। आलोचना Anton Dolin
दुलही म्याचमेकिङ्: परम्परा र संकेत
"माछा कारखाना" - एक सिद्ध उत्पादन किन्न!
फलाम TEFAL Ultragliss FV4492e0: समीक्षा र विवरण